May | 2022 | QEERROO
Posted on May 17, 2022 by Qeerroo
(Caamsaa 16/2022 Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo)
Qeerroon Bilisummaa Oromoo bara hundeeffama isaa irraa kaasee gaaffii bilisummaa Uummata Oromoo kaasuun qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turuun ni beekama. Qabsoo hadhaawaa gaggeessuun sirna EPRDF waggaa 27f Oromoo cunqursaa ture buqqisee ture. Haa tau malee injifannoon dhiiga qeerroo itti dhangalae, lafeen qeerroo kumaatamaa itti caccabee fi lubbuun ilmaan Oromoo hedduu itti wareegame shira xaxameen deebiee abbaa irree harka gale.
Injifannoon kun kan butame yakkamtoota kanneen bara EPRDF ilmaan Oromoo gurguraa, ajjeesaa fi ajjeesisaa turaniin tauun beekamaadha. Yakkamtoonni harki isaanii dhiiga ilmaan Oromootiin laaqamaa ture kunneen gochaalee fi yakka suukkanneessa Ilmaan Oromoo irratti raawwataa turan gara jabina daangaa hin qabnee fi dachaan akka raawwatan taasisee jira. Waggoota afran darban kana keessa yakki waraanaa fi daguuggaa sanyii PPn Oromoo irratti raawwataa jirtu akka addunyaatti gocha fokkisaa kan galmee xuraawaa irratti galmaa’udha.
Waraanni Abiy Ahmadiin ajajaman guyya guyyaan ajjeechaa jumlaa ummata Oromoo meesha maleeyyii irratti gaggeessaa oolu. Ajjeechaan abbootii Gadaa Karrayyuu ajjeechaan jumlaa Salaalee aanaa Warra Jaarsoo, Lixa Shaggar aanaa Ada’aa Bargaa, Gindabarat, kan Matakkal fi Walloo godaannisa yoomuu irraanfatamu miti. Godinaale Oromiyaa mara keessatti ajjeechaan wal fakkaataan waggoota afran dabran keessa yeroo adda addaatti raawwatamaa tureera. Manaa fi qabeenyi ummataa guyyuu gubamaa jira. Continue reading →
Posted on May 12, 2022 by Qeerroo
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 10, 2022
Murni aangoo irra jiru kan maqaa ‘Biltsiginnaatiin Paartii’ of yaamu waraana Oromiyaatti bobbaasee guyyuu gocha suukanneessaa ilmaan Oromoorratti raawwataa oola. Oromiyaa keessatti guyyaan Oromoon waraana PP tiin hin ajjeefamiin oole waggoota afran dabran keessatti guyyaan tokkollee hin turre. Manaa fi qabeenya ummataa gubuunis aadaa waraana maafiyaa biltsiginnaa taheera. Guyyaa irraa gara guyyaatti gochi garajabeenya PP kun dabalaa deemuun, baatii Ramadaan yeroo ummanni Soomanatti jiru humni faannoo fi Poolisoonni Amaaraa, Raayyaa Ittisa Biyyaa waliin tahuun ummata Oromoo Wallootti duuluun namoota nagayaa 30 ol ajjeesaniiru. Ummanni Walloo baatilee jahan (6)!dabran keessa namoonni 300 ol ajjeefamuun manneen isaanii kan kumaan lakkaawamu gubateera. Weellisaa Sa’aad Awwal dabalatee namoonni kuma hedduu tahan mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiru.
Ebla 21 irraa eegalee guyyoota afuriif haleellaa humna qilleensaa murni abbaa irree bilxiginnaa Shaggar Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat ganda Doggomaa fi gandoota ollaa keessatti raawwateen ummanni meesha maleeyyii 30 ol ajjeefamuu, manneen dhibbaa ol qabeenya keessa jiran waliin gubateera. Ummanni gandichaas guutummaatti qe’ee fi qabeenya isaa dhiisee gara gandootaa fi magaalota dhiyootti, gariin lagatti baqateera.
Ebla 28, 2022 Lixa Shaggar aanaa Ada’aa Bargaa ganda Caancoo Birrattee fi Tuulii Dasee keessatti waraanni Abiy Ahmadiin hoogganamu namoota nagayaa 46 ajjeesuun manneen ummataa fi qabeenya isaanii hedduu gubeera. Waraanni shiftaa PP kun Caamsaa 6, 2022 godinuma kana aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis ganda 02 keessatti abbaa daa’imman lamaa kan tahe barsiisaa Kiisii Baayisaa fi haadha warraa isaa ulfa baatii 7 kan taate Barsiiftu Gannat Birrii bakka tokkotti ajjeesuun daa’imman isaanii lameen abbaa fi haadha malee hambiseera.
Baha Shaggar aanaa Fantaallee keessattis Ebla 27, 2022 dargaggeessa ga’eessa Bulgaa Boruu bakka inni loon tiksutti ajjeesuun reeffi isaa akka hin kaafamne dhorkuudhaan halkan sadiif akka laga keessa turu gochuun gocha suukanneessaa ummata keenyarratti raawwateera. Ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuutiin booda namoonni nagayaa kurnan hedduutiin lakkaawaman sababa Oromummaa isaaniif qofa aanaa Fantaallee fi Boosat keessatti waraana Abiy Ahmad bobbaaseen ajjeefamaniiru.
Waraanni maafiyaa PP kun godina Kaaba Shaggar (Salaalee) aanaa Warra Jaarsoo keessaa ganda Jamjam Maalee fi Awwaaree Goljee keessaa namoota 18 qabanii kanneen:
1. Kaasaa Taammiruu
2. Mallasaa Simee
3. Tasfuu Tulluu
4. Tashoomaa Abbii
5. Dammuu Kaasaa
6. Kaasaa Dobocee
7. Abbush Lammaa
8. Maammushee Habtaamuu
10. Bojaa Asaffaa
11. Tolii Habtaamuu
12. Damuu Taayyee
13. Ashuu Bojaa
14. Fiqaaduu Dachaasaa
15. Shallamaa Katamaa
16. Taarikuu Katamaa
17. Addisuu Simee fi
18. Boggaalaa Continue reading →
Posted on May 10, 2022 by Qeerroo
Caamsaa 05, 2022
Jaal Dr Taddasaa Eebbaa Fidoo, baadiyaa Oromiyaa, Ona Najjoo, ganda Guduruu bakka addaa Qoxee Ginnasii keessatti, abbaa isaa obbo Eebbaa Fidoo fi haadha isaa aadde Dashii Tufaa irraa bara 1943 dhalate. Maatii qotee bulaa keessatti waan dhalateef, akkuma ijoollee maatii qotee bulaa tokkootti jabbii fi loon tiksaa, fi hojii qonnaa irraa hirmaachaa guddate. Haadhaa fi abbaan isaa , ijoolleen isaanii akka baratan fedha guddaa waan qabaniif, dura Dr. Taddasaa nama barnootaa Qeesitti galchan.Kana booddee Jaal Dr. Fidoon nama barnootaa Swedish Evangelical Mission School Najjoo jirutti galmaa’uun barnoota sadarkaa duraa achitti barate. Utuu ulaa 7 baratuu akkan lafaa naannoo sanaa qabee ji’a lamaaf isa hidhee ture. Hidhaa yeroo gad dhiisees akka lammata Najjoo dhaqee hin baranne akeekkachiisee ture. Dr. Fidoon garuu akeekkachiisi abbaa qoroo utuu isa hin dhaabiin barnoota isaa haga ulaa saddeettitti achuma Najjootti baraatee 1956 xumurate. Barnoota sadarkaa 2ffaa, 9-12tti Jimma Agricultural Schoolitti barate. Manni barumsa Jimmaa kun hojii harkaa adda addaa barsiisa waan ta’eef Dr. Fidoon boorsaa fi qabattoo tolchee gurguruun horii argatee Haadhaa fi Abbaa isaatif mana ijaaree ture.Barnoota sadarkaa 2ffaa akka xumureen Hara-mayaa Agricultural Collegetti waggaa afur baratee, qabxii olaanaa fiduu dhaan digirii tokkoffaa (BSC) argachuun 1965 eebbifame. Barnoota isaa akka itti fufuus iskolarship waan argateef USA, Wisconsin State University tti galma’ee digirii isaa lammaaffaa (MSC) argachuu dhaan eebbifame.Biyyatti deebi’uun Hara-Mayaa College barsiisuu eegale. Barsiisuun cinaatti qormaata sayensii adda addaa godhaa ture. Qormaata inni godhe haga har’aatti bakka guddaa qabatee jiruu Xaafii irratti qorannoo inni godhee dha. Qorannoo Xaafii kana bara 1969 xumuruun kitaaba xiqqaa tokko barreessera. Qorannoo Dr. Fidoon gaafa sana jalqabeen har’a gosa Xaafii 3842 akka jiranii fi maqoota xaafii kan akka Daabii, Kara Debi, gea lamme, muri fi kkf moggaafamanii jiru.
Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo Yaadachuudhaan Kaayyoo Isaan Irratti Wareegaman Galmaan Gayuuf Irbuu Ni Haaromfanna